【 အလှအပနှငျ့ ကနျြးမာရေး 】သားအိမျကြှံခွငျး (Uterine Prolapse) | Opinion Leaders
【 အလှအပနှငျ့ ကနျြးမာရေး 】သားအိမျကြှံခွငျး (Uterine Prolapse)
သားအိမျကြှံခွငျးဟာ သားအိမျကို ဆိုငျးကွိုးသဖှယျ ဆှဲပေးထားတဲ့ တငျပဆုံအတှငျးက ကွှကျသားတှေ အားနညျးလာခွငျးကွောငျ့ သားအိမျဟာ မှေးလမျးကွောငျးကတဆငျ့ အပွငျဘကျသို့ ကြှံကလြာခွငျးဖွဈပါတယျ။ အသကျအရှယျမရှေးဖွဈနိုငျပမေယျ့ သှေးဆုံးပွီးတဲ့ အမြိုးသမီးတှေ အထူးသဖွငျ့ ကလေးအမြားကွီးရိုးရိုးမှေးထားဖူးတဲ့ မိခငျတှမှော ပိုအဖွဈမြားပါတယျ။
ဘာကွောငျ့ ကွှကျသားတှေ အားနညျးလာရတာလဲ?
-မီးဖှားရခကျခဲခွငျး မီးဖှားစဉျ မှေးလမျးကွောငျး ထိခိုကျဒဏျရာရခွငျး
-သှေးဆုံးပွီးခြိနျတှငျ အီစထရိုဂငျြ ဟျောမုနျး နညျးသှားခွငျး
-အလေးအပငျမခွငျး စတဲ့အခကျြတှကေ သားအိမျပတျလညျက ကွှကျသားတှကေို ကွာတဲ့အခါ အားနညျးလာစပေါတယျ။
ဒါကွောငျ့ အသကျကွီးတဲ့သူတှေ ၊ကလေးအမြားကွီး ရိုးရိုးမှေးဖူးတဲ့ မိခငျတှေ၊အရငျက pelvic surgery လုပျထားတဲ့သူတှမှော ပိုတှရေ့တာပါ။
အဆငျ့ ၁ - သားအိမျအောကျသို့ ကြှံသျောလညျး မှေးလမျးကွောငျး(Vagina)အတှငျးတှငျသာ ရှိသေးခွငျး
အဆငျ့ ၂ - မိနျးမကိုယျအဝ Introitus ထိ ကြှံခွငျး နှငျ့
အဆငျ့ ၃ - မိနျးမကိုယျအဝ Introitus အပွငျထိ ထှကျနခွေငျး တို့ဖွဈပါတယျ။
ဘယျလို လက်ခဏာတှနေဲ့ တှရေ့မှာလဲ?
-မိနျးမကိုယျ မှေးလမျးကွောငျးမှ အလုံးတခုခု ထိုးထှကျနခွေငျး
-တငျပဆုံတှငျး လေးလံသော ခံစားခကျြဖွဈခွငျး
သားအိမျကြှံခွငျးဟာ တငျပဆုံတှငျးမှာရှိတဲ့ အခွား အစိတျအပိုငျးတှကြှေံခွငျးနဲ့ပါ တှဲတှရေ့နိုငျပါတယျ။ သားအိမျအရှဘေ့ကျမှာ ဆီးအိမျရှိတဲ့အတှကျ ဆီးအိမျပါကြှံရငျ Anterior prolapse (Cystocele) လို့ချေါပီး အနောကျဘကျက အစာဟောငျးအိမျကြှံရငျတော့ Posterior prolapse (Rectocele) လို့ချေါပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ သားအိမျကြှံတာ အခြိနျကွာလာရငျ အပွငျဘကျကို ကြှံနတေဲ့ နရောမှာ အနာဖွဈလာနိုငျပါတယျ။
ကုသခွငျးကလညျး သားအိမျကြှံခွငျး အဆငျ့တှပေျေါ မူတညျပါတယျ။
သားအိမျကြှံခွငျး လက်ခဏာတှေ သိပျမဆိုးရငျတော့
-Kegel's exercise လို့ချေါတဲ့ တငျပဆုံကွှကျသားတှေ အားကောငျးလာအောငျ လကေ့ငျြ့ခနျးလုပျခွငျး
- ဝမျးမခြုပျအောငျနခွေငျး စတာတှနေဲ့ သကျသာနိုငျပါတယျ။ လိုအပျရငျတော့ အောကျမှာ ဖျောပွမယျ့ကုသနညျးတှနေဲ့ ကုသရမှာပါ။
၁)သားအိမျတှငျး Pessary ချေါ ကှငျးထညျ့ခွငျး
Pessary ဆိုတာ ရာဘာနဲ့ လုပျထားတဲ့ ကှငျးလေးဖွဈပီး vagina လို့ချေါတဲ့ မှေးလမျးကွောငျးထဲ ထညျ့ထားခွငျးဖွငျ့ သားအိမျကြှံမကြ လာအောငျ ထိနျးထားခွငျးပါ။ အခြိနျမှနျ လိုအပျသလို သနျ့ရှငျးရေးလုပျ လဲလှယျပေးဖို့တော့ လိုမှာပါ။
သားအိမျထုတျပဈခွငျး (hysterectomy) နဲ့ သားအိမျမထုတျဘဲ pelvic floor muscles လို့ချေါတဲ့ တငျပဆုံတှငျးက ကွှကျသားတှေ ပွနျအားကောငျးလာအောငျပွုပွငျခွငျး ဆိုပီး နှဈမြိုးရှိပါတယျ။ ဒုတိယနညျးကတော့ သားသမီးထပျယူခငျြသေးတဲ့သူတှမှော လုပျနိုငျပါတယျ။
ဇီဝက ( ဆေး-၁ )
သားအိမ်ကျွံခြင်းဟာ သားအိမ်ကို ဆိုင်းကြိုးသဖွယ် ဆွဲပေးထားတဲ့ တင်ပဆုံအတွင်းက ကြွက်သားတွေ အားနည်းလာခြင်းကြောင့် သားအိမ်ဟာ မွေးလမ်းကြောင်းကတဆင့် အပြင်ဘက်သို့ ကျွံကျလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အသက်အရွယ်မရွေးဖြစ်နိုင်ပေမယ့် သွေးဆုံးပြီးတဲ့ အမျိုးသမီးတွေ အထူးသဖြင့် ကလေးအများကြီးရိုးရိုးမွေးထားဖူးတဲ့ မိခင်တွေမှာ ပိုအဖြစ်များပါတယ်။
ဘာကြောင့် ကြွက်သားတွေ အားနည်းလာရတာလဲ?
-မီးဖွားရခက်ခဲခြင်း မီးဖွားစဉ် မွေးလမ်းကြောင်း ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခြင်း
-သွေးဆုံးပြီးချိန်တွင် အီစထရိုဂျင် ဟော်မုန်း နည်းသွားခြင်း
-အလေးအပင်မခြင်း စတဲ့အချက်တွေက သားအိမ်ပတ်လည်က ကြွက်သားတွေကို ကြာတဲ့အခါ အားနည်းလာစေပါတယ်။
ဒါကြောင့် အသက်ကြီးတဲ့သူတွေ ၊ကလေးအများကြီး ရိုးရိုးမွေးဖူးတဲ့ မိခင်တွေ၊အရင်က pelvic surgery လုပ်ထားတဲ့သူတွေမှာ ပိုတွေ့ရတာပါ။
အဆင့် ၁ - သားအိမ်အောက်သို့ ကျွံသော်လည်း မွေးလမ်းကြောင်း(Vagina)အတွင်းတွင်သာ ရှိသေးခြင်း
အဆင့် ၂ - မိန်းမကိုယ်အဝ Introitus ထိ ကျွံခြင်း နှင့်
အဆင့် ၃ - မိန်းမကိုယ်အဝ Introitus အပြင်ထိ ထွက်နေခြင်း တို့ဖြစ်ပါတယ်။
ဘယ်လို လက္ခဏာတွေနဲ့ တွေ့ရမှာလဲ?
-မိန်းမကိုယ် မွေးလမ်းကြောင်းမှ အလုံးတခုခု ထိုးထွက်နေခြင်း
-တင်ပဆုံတွင်း လေးလံသော ခံစားချက်ဖြစ်ခြင်း
သားအိမ်ကျွံခြင်းဟာ တင်ပဆုံတွင်းမှာရှိတဲ့ အခြား အစိတ်အပိုင်းတွေကျွံခြင်းနဲ့ပါ တွဲတွေ့ရနိုင်ပါတယ်။ သားအိမ်အရှေ့ဘက်မှာ ဆီးအိမ်ရှိတဲ့အတွက် ဆီးအိမ်ပါကျွံရင် Anterior prolapse (Cystocele) လို့ခေါ်ပီး အနောက်ဘက်က အစာဟောင်းအိမ်ကျွံရင်တော့ Posterior prolapse (Rectocele) လို့ခေါ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် သားအိမ်ကျွံတာ အချိန်ကြာလာရင် အပြင်ဘက်ကို ကျွံနေတဲ့ နေရာမှာ အနာဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
ကုသခြင်းကလည်း သားအိမ်ကျွံခြင်း အဆင့်တွေပေါ် မူတည်ပါတယ်။
သားအိမ်ကျွံခြင်း လက္ခဏာတွေ သိပ်မဆိုးရင်တော့
-Kegel's exercise လို့ခေါ်တဲ့ တင်ပဆုံကြွက်သားတွေ အားကောင်းလာအောင် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်း
- ဝမ်းမချုပ်အောင်နေခြင်း စတာတွေနဲ့ သက်သာနိုင်ပါတယ်။ လိုအပ်ရင်တော့ အောက်မှာ ဖော်ပြမယ့်ကုသနည်းတွေနဲ့ ကုသရမှာပါ။
၁)သားအိမ်တွင်း Pessary ခေါ် ကွင်းထည့်ခြင်း
Pessary ဆိုတာ ရာဘာနဲ့ လုပ်ထားတဲ့ ကွင်းလေးဖြစ်ပီး vagina လို့ခေါ်တဲ့ မွေးလမ်းကြောင်းထဲ ထည့်ထားခြင်းဖြင့် သားအိမ်ကျွံမကျ လာအောင် ထိန်းထားခြင်းပါ။ အချိန်မှန် လိုအပ်သလို သန့်ရှင်းရေးလုပ် လဲလှယ်ပေးဖို့တော့ လိုမှာပါ။
သားအိမ်ထုတ်ပစ်ခြင်း (hysterectomy) နဲ့ သားအိမ်မထုတ်ဘဲ pelvic floor muscles လို့ခေါ်တဲ့ တင်ပဆုံတွင်းက ကြွက်သားတွေ ပြန်အားကောင်းလာအောင်ပြုပြင်ခြင်း ဆိုပီး နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ ဒုတိယနည်းကတော့ သားသမီးထပ်ယူချင်သေးတဲ့သူတွေမှာ လုပ်နိုင်ပါတယ်။
ဇီဝက ( ဆေး-၁ )
【အလှအပနှငျ့ကနျြးမာရေး】“ သှေးအားနညျးရောဂါ (Anaemia)”